Oracle Inosvitsa 3-Gore reJava Chikanganiso Patch | Linux Vakapindwa muropa
pangataura yakaburitsa yechipiri yakakosha yekuvandudza, chigamba chekuchengetedza che2019 chakasvika munaKubvumbi. Iyo kambani yakagadzirisa kusvika pamatambudziko makumi maviri nemapfumbamwe musoftware yayo, uye inokanganisa zvakanyanya kuchengetedzeka. Kunyanya, chigamba cheizvi 297 kudzvinyirira chakaburitswa muna Kubvumbi 17, 297 iyo iine CVSS (Yakajairika Vulnerability Scoring System) ye53 kana yakakwira, iyo inoratidza kukosha kwavo. Hakusi kukanganiswa kwese kuri kuitika, izvo zvakatoipisisa.
Zvinoitika kuti kune vamwe vava nesu kwemakore anodarika matatu. Makore iwawo mune Java raibhurari yanga iri panjodzi zvachose nekuda kwevanorwisa pasina dambudziko kuzivikanwa. Ichi hachisi chinhu chitsva, kubata nedambudziko rekare uye nyowani chinhu icho Oracle nyanzvi dzekuchengetedza dzinofanira kubata nadzo kuvadzivirira kuti varege kuwanikwa kare nevapambi vemakomputa uye kushandisa zviito zvinopesana navo.
Kushushikana kwave kunesu kweanoda kusvika makore mana ndiyo yakanyoreswa muCVE nekodhi CVE-2016-1000031 yeJava inowanikwa muApache Commons FileUpload raibhurari inoshandiswa mune akawanda maOracle mafomu. Kushupika kwaivapo muDiskFileItem chinhu uye kunogona kushandisirwa kugona kunyora nekuteedzera mafaera kudisiki zvisina tsarukano. Vanorwisa vari kure vanogona kushandisa kushushikana uku uye vatore kutonga kwakazara kwenzvimbo yakakanganiswa.
Zvirokwazvo haisi yakanaka kwazvo nhau yeOracle mupfungwa ye basa rakaitwa kare nehurongwa hwavo hwepodfolio, kunyange hazvo ivo vakagadzirisa nyaya idzi neizvi zvigamba uye munhu wese akabatwa anofanirwa kumhanyira kugadzirisa masisitimu Asi isu hatifarire kuziva iyi mhando yenhau, sezvo zvigadzirwa zveOracle zvinotsigira basa rakawanda uye akakosha masisitimu, uye hazvingazoite rombo rakanaka kana ikava chimwe chinhu chakafanana nezvakaitika neAdobe neFlash, zvichipiwa huwandu hwehutambudzi hwakawanikwa uye zvinotambudza sei izvo zvimwe ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Oracle inosvitsa chigamba che Java chikanganiso chinotora makore matatu